पत्रकार शाहीलाई धम्की, यस्तो छ मेयरको विज्ञप्ति रातारात समाचार ‘डिलीट’ » खबरहरुको एउटै केन्द्र
पत्रकार शाहीलाई धम्की, यस्तो छ मेयरको विज्ञप्ति रातारात समाचार ‘डिलीट’
शुक्रबार, कार्तिक ३०, २०७५ २१:३६ मा प्रकाशित !
कालिकोट । नागरिक दैनिकले अनलाइन सस्करणमा प्रकाशित गरेको समाचार रातारात ‘डिलेट’ गरेको छ । कालिकोटको रास्कोट नरपालिकाका नगर प्रमुख काशिचन्द्र बरालका छोरासँग जोडिएको समाचार नागरिकन्यूज डटकममा प्रकाशित भएको थियो । यही कात्तिक २७ गते प्रकाशित उक्त समाचार एकदिन पछि हटाइएको हो ।
सामाजिक संजाल र मिडियामा भाइरल भएको उक्त समाचार अहिले नागरिकन्यूज डटकममा भेटिदैन । समाचार नागरिक दैनिकका कालिकोट संवाददाता पवित्रकुमार शाहीले लेखेका थिए । पत्रकार शाहीले मेयर बरालका छोरा दिनेशले गाडी चलाएको फोटो राखेर ‘नगरको गाडीमा छोराको मस्ती’ शिर्षकमा समाचार लेखेका थिए ।
भाइरल भएको उक्त समाचार नागरिकन्यूज डटकमले नभेटिएपछि हामीले पत्रकार शाहीसँग सम्पर्क गरेका थियौं । शाहीले आफूले पनि हेर्दापनि समाचार नखुलेको बताए । उनले समाचार हटाइएको वा अन्य कुनै प्राविधिक अाफूलाई जानकारी नभएको बताए । पत्रकार शाहीले अाफूलाई ज्यान मार्ने धम्की अाएको बताए । मेयर बराल पक्षबाटै आएको भएपनि कसले दिएको हो भन्नेबारे शाहीले केही बताउन चाहेनन् । उनले अाफूलाई अाएको धम्कीबारे जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराएको समेत बताए । पत्रकार शाहीले उक्त समाचारको प्रमाण अाफूसँग सुरक्षित रहेको दाबी समेत गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश सचिव समेत रहेका शाहीले आफूले १४ वर्षको पत्रकारिताम कहिलै पनि प्रमाण विनाको समाचार नलेखेको सामाजिक संजालमा लेखेका छन् । उनले उनले तथ्यहिन समाचार लेखको भए आफ्नो हात आफैले काट्ने समेत बताएका छन् ।
यसैबीच मेयर बरालले एक विज्ञप्ति जारी गरेर समाचारको खण्डन गरेका छन् । उनले समाचार झुटो र पूर्वाग्रहमा लेखिएको बताए ।
यस्तो छ मेयर बरालले निकालेको विज्ञप्ति
नागरिक न्यूज डटकममा प्रकाशित समाचार यस्तो थियो । तर अहिले उक्त लिंक खुल्दैन ।
कालिकोट – जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका मेयर कासीचन्द्र बरालले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेका छन्। नगरपालिकाको गाडी छोरालाई सिकारुकोरुपमा प्रयोग गर्न दिँदै मेयर बरालले सरकारी गाडकिो दुरुपयोग गरेका हुन्। दसैँ–तिहारको लामो विदामा नगर प्रमुख बरालले सुर्खेत-नेपालगंज तिर छोरालाई गाडी सिकाउन लिएका हुन्।
नियम र कानुन विपरित सरकारी गाडी छोरालाई सिक्न दिएको भन्दै नगरवासी आक्रोसित बनेका छन्। नगर प्रमुख बरालका छोरा दिनेश बरालले वुवाको गाडी भन्दै ढुक्कका साथ प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपालगंजको व्यस्त सडकमा नगरपालिकाको गाडी मेयरका छोराले हाँकेको देख्दा स्थानीय चकित बनेका थिए।
गाडीमा बसेका एक जनाले त छोरालाई नै चालक बनाएका हुन की सोचेका रहेछन्। बुझ्दै जाँदा गाडी छोरालाई सिकाउन प्रयोग भएको रहेछ। मेयरका छोराले सरकारी नम्बर प्लेट भएको गाडी गुडाउदै गरेको फोटो र भिडियो समेत सार्वजनिक भएको छ।
नेपागंजतिरको यात्रागर्दै नगर प्रमुखका छोरा दिनेशले फेसवुकमै तस्बिर र भिडियो पोष्ट गरेका छन्। सरकारी गाडी दुरुपयोग मात्र होइन स्रोतकाअनुसार नगर प्रमुखले कार्यालयको फोहोर हाल्ने डस्टविनदेखि ठुला अन्य आवश्यक सामग्री आफै खरिद गर्ने गरेका छन्।
नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई समेत अहिलेसम्म नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। सडक, भवन, खानेपानी लगायतका विकासका पूर्वाधारमा सुस्त गति देखिन्छ। नगर प्रमुखको घर वास्तविक रास्कोटको फुकोटमा भएपनि विदाको समयमा उनी सुर्खेतको घरमा बस्ने गरेका छन्। उनले नगरपालिकाको गाडी लिएर सुर्खेतमै दसैँ–तिहार मनाएका हुन्। वास्तविक गाडी चालक अम्मल फर्शाल भएपनि छोराको साथमा तिहारको मौका पारेर उनले सुर्खेत र नेपालगंजतिर छोरालाई गाडी सिकाएका हुन्। उता नगर प्रमुख बरालले भने छोरा दिनेशले गाडी नचलाएको दावि गरेका छन्।
नागरिकन्यूज यसरी समाचार सामाजिक संजालमा शेयर गरेको थियो ।
नागरिको न्यूजको उक्त समाचारको लिंक हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
मेयर बरालका छोरा दिनेशले नेपालगंज जाँदै गर्दा गाडीको चालक सिटबाट खिचेको फोटो र गाडी चलाउँदै गरेको भिडियो फेसबुकमा पोष्ट गरेका थिए ।
यसरी आफूलाई मूलाधारको पत्रिका भन्ने संचारमाध्यमले आफैले प्रकाशित गरेको समाचार हटाउँदा आम पठक वर्गमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? यदि गलत सूचनाकै आधारमा समाचार प्रकाशित भएमा बरु माफि माग्न सकिन्थ्यो । हुन त नागरिक टीमले यसअघि दुई समाचार पुष्टी नभएपछि माफी मागेको थियो ।
PREVIOUS POST Previous post: निर्मला हत्या प्रकरण : संकास्पद थप चारको डीएनए रिपोर्ट पनि मेल खाएन
NEXT POST Next post: ६ दिन पछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं : महामन्त्री झा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, कार्तिक ३०, २०७५ २१:३६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, कार्तिक ३०, २०७५ २१:३६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, कार्तिक ३०, २०७५ २१:३६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, कार्तिक ३०, २०७५ २१:३६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, कार्तिक ३०, २०७५ २१:३६